July 19, 2019 Cele Love 0
အောင်ကြီးကသိန်း ၅၀၀ အတွက် သူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံနိုင်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ သမီးတစ်ဦးမှပြော ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမှုဖွင့်ခံထားရသူ ကိုအောင်ကြီးဟာ ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိန်း ၅၀၀ တစ်ချိန်တည်းရှာရန် မလွယ်တာကြောင့် တရားခံအဖြစ်ဟုတ်မှန်သည်ဟု ဝန်ခံနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ သမီးတစ်ဦးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ ကံ သာ ဖြစ်ပြီး အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့လည်း သူမက […]
သရဲဝင်ပူးခံရပြီး နံရံတွေ ပေါ်ကို ကပ်နေတဲ့ လူ …..(ရုပ်သံ)
သရဲဝင်ပူးခံရပြီး နံရံတွေ ပေါ်ကို ကပ်နေတဲ့ လူ …..(ရုပ်သံ) ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ စာဖတ်သူတို့ ခင်ဗျာ.. ထူးထွေဆန်းပြားလှတဲ့ဘဒ္ဒကမ္ဘာကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ သိမြင်နိုင်တာတွေဟာ အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မသိမမြင် နားမလည်နိုင်တဲ့ အရာတွေဟာသိန်းပေါင်း သန်းပေါင်းမက ရှိနိုင်နေပါသေးတယ် …။ ကျွန်တော်တို့သာမက အဖြစ်အပျက်တိုင်းကို သီအိုရီများနဲ့ တွက်ချက်ပြီး […]
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝှမ်ကို လုပ်ကြံတဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန် ဗုံးခွဲခံရမှု ဖြစ်စဉ် နှင့် ဗီဒီယိုဖိုင် ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၉) ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အာဇာနည်ကုန်း၌ ဗုံးပေါက်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ ချန်ဒူးဝမ် အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကင်ဂျုံအီ […]
ကလေးတွေ ကို ၂ ယောက် တည်းထား ခဲ့လို့ ကလေးတွေ အသက် သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရ
ကလေးတွေ ကို ၂ ယောက် တည်းထား ခဲ့လို့ ကလေးတွေ အသက် သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရ ချစ် ခင်လေးစားရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာ..အခုတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သတင်းဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ အလုပ်များတဲ့ မိဘတွေကို သတိပေးစကား ဆိုလိုက်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီရုပ်သံဖိုင်လေးထဲမှာဆိုရင် ကလေးနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ မရှိတုန်းမှာ […]
အပျိုပေါက်မလေးတို့ ဗိုက်မကြီးပေမယ့် …ဗိုက်ကြီးတာထက် ဆိုးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ရှိသေးလို့ပါ အပျို​ပေါက်​ ညီမ​လေးတို့​ရေ …. ဗိုက်​မကြီးသွား​ ပေမယ့်​ ဗိုက်​ကြီး သလိုပဲ ဆိုးရွားတဲ့ အ​ကြောင်း​လေး ဒီတစ်​ခါ အကိုက​​ ပြောပြချင်​တယ်​ ။ ချစ်​လို့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ၊ အ​ပျော်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ အတူ​နေကြ ပြီးတဲ့​နောက်​ […]
ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသူတွေဟာ EX ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်တောင် ဆက်ပြီးမပတ်သတ်ပါဘူး ..
ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသူတွေဟာ EX ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်တောင် ဆက်ပြီးမပတ်သတ်ပါဘူး .. လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်အပေါ် ခံယူချက်ချင်းလည်းမတူညီသလို၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဘောထားချင်းလည်း မတူကြပါဘူး။ လူတိုင်းလိုလိုမှာ ရည်းစားဟောင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကလည်း သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်ရှိနေတယ်၊ တစ်ချို့တွေကလည်း လုံးဝကိုယတိပြတ် ဘဝထဲကနေ စွန့်လွှတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ EX ကို […]
မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြောဆိုနေသူတွေကို တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး…
မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြောဆိုနေသူတွေကို တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး… နေခြည်ဦးဟာ သူမအပေါ် မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင် တရားစွဲမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သတင်းဖြန့်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်း သည်းခံနေမယ့်လူမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူက ပြောပါတယ်။ နေခြည်ဦးဟာ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ စာတစ်ကြောင်းကြောင့် မျက်နှာပူစရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီစာကြောင့် မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောဆိုသူတွေကိုလည်း တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ‘’အသေရေ ဖျက်မှု ၆၆(ဃ) […]
ဘုရားပေါ်မှာ ပရောဂ၀င်ပူးပြီး အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေ တောင်းစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ခေါ်ခဲ့ရ(ရုပ်သံ) မော်လမြိုင် တောင်ဝိုင်းတောင်ထိပ် ရွှေကြက်ယက်ဘုရားတွင် ပယောဂတခုခုဝင်ပူးပြီး ထိန်းမရဖြစ်နေသည်ဆိုသော အမျိုးသမီးအား တောင်ပေါ်မှ နေအိမ်သို့ ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ကြသည် …. ။ 18.7.2019 မွန်းလွဲ(2:00)pm ခန့် မော်လမြိုင်မြို့ တောင်ဝိုင်း တောင်ထိပ် ရဟန္တာ(၅၀၀) […]
နိုင်ငံခြားသားနဲ့မြန်မာနဲ့ကွာခြားပုံကို ပြောပြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် သင်ဇာဝင့်ကျော်က မကြာသေးမီကမှ နိုင်ငံခြားသားချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲထားပေမယ့်လည်း ထွေထွေထူးထူးအသည်းကွဲနေတာမျိုးမတွေ့ရပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သာအေးအေးလူလူဆက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ သင်ဇာက မကြာမီက မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပေမယ့်သိပ်မခံစားရတဲ့အကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောပြသွားပါတယ် … ။ သင်ဇာက ပွဲတက်တွေများပြီး ကားရိုက်နည်းလို့ ပွဲတက်မင်းသမီးဖြစ်သွားမှာမစိုးရိမ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ် “ပွဲတက်တာက သိပ်မပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်။ နယ်ပွဲတွေကတော့နည်းနည်းပင်ပန်းတယ်။ အချိန်လည်းပေးရတာကို။ သရုပ်ဆောင်လည်းသရုပ်ဆာင်အလျောက်ပေါ့နော်။ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ကားလေးတွေ […]
အပေါင်းအသင်းကြောင့် သမီးဖြစ်သူလမ်းမှားရောက်နေတဲ့ အကြောင်းတွေကို ရင်နာနာနဲ့ဖွင့်ပြောလာတဲ့ ကစ်ကစ်…( ရုပ်/သံ )
အပေါင်းအသင်းကြောင့် သမီးဖြစ်သူလမ်းမှားရောက်နေတဲ့ အကြောင်းတွေကို ရင်နာနာနဲ့ဖွင့်ပြောလာတဲ့ ကစ်ကစ်…( ရုပ်/သံ ) သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ကတော့ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုတွေကြောင့် ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းမှုတွေဖြစ်လာတာနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေလည်းရပ်နားလိုက်ရပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေကလည်း ကစ်ကစ် ဆေးရုံစရိတ်အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် … ။ ကစ်ကစ်ကတော့ သမီးဖြစ်သူရဲ့ အပေါင်းအသင်းကြောင့် လမ်းမှားရောက်နေခဲ့ရတာတွေကို ခုလိုပဲရင်နာနာနဲ့ […]